दुनियामा एउटा यस्तो कलेज पनि रहेछ जहाँ फेल भएकाहरुले मात्र पढ्न पाउँछन्::KhojOnline.com
दुनियामा एउटा यस्तो कलेज पनि रहेछ जहाँ फेल भएकाहरुले मात्र पढ्न पाउँछन्
कलेजमा फेल हुनुभयो ? केही चिन्ता लिनुपर्दैन । दुनियामा एउटा यस्तो कलेज पनि रहेछ जहाँ फेल भएकाहरुले मात्र पढ्न पाउँछन् ।
फेल भएकाहरुले मात्र पढ्न पाउने कलेज अमेरिकामा छ । उक्त कलेजको नाम हो स्मिथ कलेज । सो कलेजले म्यासाच्यूसेट्स युनिभर्सिटीको सहयोगमा एक विशेष पाठ्यक्रम सञ्चालन गरेको छ जुन केवल फेल भएका विद्यार्थीहरुले मात्र पढ्न पाउँछन् ।
उक्त कलेजले संचालन गरेको सो विशेष कोर्सको नाम हो फेलिङ वेल । फेल भएसँगै आफ्नो करिअरलाई लिएर निकै चिन्तामा रहेका विद्यार्थीहरुलाई यो पठाइले निकै ठूलो सहयोग मिल्ने बताइउको छ ।
उक्त कोर्समा विद्यार्थीहरुलाई पढाइन्छ की फेल हुनुका पनि फाइदा हुन्छन् । साथै विद्यार्थीहरुलाई भविष्यका सम्भावना तथा अघि बढ्ने विषयमा जानकारीहरु प्नि सो कोर्समा गराइन्छ ।
वास्तवमा पढाइमा मात्र होइन, प्रेम सम्बन्ध, व्यवसाय लगायतका जिवनका विभिन्न पाटाहरुमा असफल हुनेहरुले यो पाठ्यक्रम पढ्न पाउँछन् र जिवनमा सकारात्मक उर्जा ग्रहण गर्न सक्दछन् ।
यो कलेजमा भर्ना पाउन के गर्ने ? पहिले त अमेरिका जानुपर्यो । त्यसपछि उक्त कलेजमा गएर तपाइँले आफु के कुरामा फेल भएको हो बताउनुपर्दछ जस्तै जागिरमा हो की पढाइमा वा सम्बन्ध इत्यादिमा । त्यसपछि कलेजले तपाइँलाई भर्ना लिन्छ । अनि फेलिङ वेल कोर्स पढाइन्छ तपाइँलाई जहाँ विशेष कक्षाहरु संचालन ह’न्छन् । कक्षमा असफलतालाई कसरी सामना गर्ने, उत्प्रेरित भएर कसरी अघि बढ्ने लगायतका कुरा सिकाइन्छ । कलेजले तपाइँलाई असफलताको प्रमाणपत्र सँगै सफलता प्राप्त गर्ने बाटो देखाइदिन्छ ।
असफलहरुले पढ्ने विशेष कोर्स संचालन गर्ने स्मिथ कलेज निकै चर्चामा छ अचेल । कलेजमा भर्ना ह’नेहरुको संख्या पनि बढिरहेको बताइएको छ । एजेन्सी
आइत, साउन १, २०७४ मा प्रकाशित
शिक्षामा नौटंकी नाटक , राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको नयाँ प्रारुप आज पारित
शिक्षामन्त्रीद्वारा १ देखि १२ सम्मको नयाँ पाठ्यक्रम स्वीकृत: यस्तो छ अबको पाठ्यक्रम राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको नयाँ प्रारुप आज पारित भएको छ । शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्ले उक्त प्रारुप पारित गरेसँगै कक्षा ११ र १२ पनि कक्षा एक देखि १०...
ट्युसन पढाएरै खर्बपति बने
हालैका दिनहरुमा चीनका एकजना शिक्षक चर्चामा छन् । मानिसहरु उनको कमाईका बारेमा सुनेर अचम्ममा पर्दछन् । नपरुन् पनि किन ? उनी ट्युसन पढाएरै खर्बपति बनेका छन् । अहिले उनीसँग १ खर्ब रुपैयाँ बराबरकोे सम्पत्ति छ । चीनका ३६ वर्षीय लियु याचोले केही वर्षयता राजधानी बेइजिंगमा विद्यार्थीहरुलाई...
नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) को अध्यक्षमा विष्णुहरि पाण्डे विजयी
वैशाख, काठमाडौं । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) को अध्यक्षमा विष्णुहरि पाण्डे विजयी भएका छन् । अध्यक्षका प्रत्यासी सरोजकुमार बस्नेतलाई पराजित गर्दै पाण्डे अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् । शनिबार सम्पन्न निर्वाचनमा पाण्डेले १७७ मत ल्याए भने बस्नेत १६५ मतमा रोकिए । प्रथम उपाध्यक्षमा भने बस्नेत समूहका महेशबाबु...
इक्यानको बस्नेत समूहले उम्मेदवारी घोषणासँगै संघको भावी कार्यक्रमका कार्यपत्रहरु सार्वजनिक
काठमाडौं । अस्ति बेलुका ६ बजेबाट शुरु भएको इक्यानको १२औं महाधिवेशनको तयारीमा बस्नेत समूहले उम्मेदवारी घोषणासँगै संघको भावी कार्यक्रमका कार्यपत्रहरु सार्वजनिक गरेको छ । २४ बुँदे घोषणापत्रमा “२४ महिना २४ काम सही नेतृत्व, साझा इक्यान” भन्ने उद्घोष सहित कार्यक्रम शुरु भएको थियो । शैक्षिक परामर्श संघमा आबद्ध सदस्य...
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) बिहीबारबाट सुरु
८ चैत, काठमाडौं । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) बिहीबारबाट सुरु भएको छ । चार लाख ८५ हजार ५ सय ८६ विद्यार्थीहरु सहभागी परीक्षा चैत २० गते सकिने छ नियमिततर्फ ४ लाख ६१ हजार ५ सय १५ र एक्जाम्टेडतर्फ २४ हजार ७१ जना परीक्षार्थी सहभागी छन् । ८...
बुध्द प्रकाश सेकेन्डरि स्कुल त्यस क्षेत्रकै नमूना स्कुल
हरेक बच्चा हरुको प्रतिभा प्रस्फुटन गर्ने उद्देश्यका साथ संचालित स्कुल बुद्ध प्रकाश सेकेन्डरी गोकर्नेश्वोर ६ नारायणटारमा पर्दछ । करिब ७00 बिध्यार्थी पठन पाठन गरिरहेको यो स्कुलमा किताबको ज्ञानको अलावा अतिरिक्त क्रियाकलापलाई पनि विशेष ध्यान दिइने गरिन्छ । बाल बालिकाभित्र लुकेर बसेका प्रतिभालाइ पहिचान गरि उजागर गर्न प्रोत्साहन...
‘केपी ओली उधारो भाका राख्छन्, वचन पूरा गर्दैनन्’– राधाकृष्ण मैनाली
माघ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका पुराना नेता राधाकृष्ण मैनाली झापा आन्दोलन हुँदै तत्कालीन नेकपा मालेका जन्मदाता हुन् । वामपन्थी नेता मैनालीसँग दुईवटा पार्टी एकताका तीतामीठा अनुभव छन्ः एक- ०४७ साल चैतमा माले र मार्क्सवादीलाई
कार्ल मार्क्सको दुर्लभ अन्तर्वार्ता, भने – “आजसम्म कुनै पनि महान् आन्दोलन विनारक्तपान भएको छैन”
सन् १८७९ मा अमेरिकी रिपब्लिकनहरुको अखबार ‘शिकागो ट्रिब्युन’ का एक सम्वाददाताले कार्ल
कम्युनिष्ट मन्त्रीको सम्पत्तिमा दम्पती विवरण !
हुन त उनी आफू आफै पनि आफ्नोको मात्र मान्छे
लेख्दा लेख्दै रुन्छु :साबित्रा उमरा
म लेख्दा लेख्दै रुन्छु भने दादा समाज सेवा गर्दा
नेताहरु सुखभोगमा लागे । जनताको अवस्था पहिले जहाँ थियो, त्यसमा अहिले पनि खासै सुधार आउन सकेको छैन ।
फागुन, काठमाडौं । ‘सत्ता बन्दुकको नालबाट जन्मिन्छ’ भन्ने आदर्शसहित